Blog – T-WORK SYSTEM
09965088114 — sales@tworksystem.com
By T-Work System	| Jun 2, 2021
သင့် ကိုယ်ပိုင် Website များ လွှင့်တင်ရန် လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ နေရာ တစ်ခုရှာနေပါသလား..? ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ စတင်ခဲ့ပြီး (၅) နှစ်တိုင်တိုင် ရပ်တည်ခဲ့သည့် T-Work System မှ -လုံခြုံမှုမြင့်မားသော Virtual Private Server များ – Web Server…
Online Shopping လုပ်ကိုင်နေသူလား..? လူကြီးမင်း Online Business အတွက် ကိုယ်ပိုင် Website ပိုင်ဆိုင်ထားပြီလား..?နိုင်ငံတော်အစိုးရ ထုတ်ပြန်ချက်အရ လူကြီးမင်း Online Business မှာ Website တခုရှိကို ရှိရတော့မှာပါဒီအတွက် ဘာတွေများ ပြင်ဆင်ထားပြီးပြီလဲ..? မဖြစ်မနေ ကိုယ်ပိုင် Website တွေကို ပိုင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုပေမယ့်…
တလ တသောင်းကျပ် အသုံးပြုရုံဖြင့် T-WORK Hosting 1GB plan ရရှိမှာ ဖြစ်ပြီး 20GB SSD Storage လည်း ရရှိမှာပါနော် Email Account လည်း အကန့်အသတ်မရှိ ဖန်တီးနိုင်ပါပြီDatabase2ခု တည်ဆောက်ထားနိုင်ပြီးSecurity ပိုင်းတွင်လည်း Secured by…
Online shopsများအတွက် Performance အမိုက်ဆုံးနှင့် စျေးအသက်သာဆုံး E-Commerce Platform သင့်Online Shopကို ခေတ်နှင့်အညီ ဖွင့်လှစ်ရောင်းချရန် အချိန်ရောက်ရှိပါပြီ Computer တစ်လုံးနှင့် အချိန်မိနစ် 90 ခန့်ပေးရုံဖြင့် အွန်လိုင်းစတိုးတစ်ခုကို စတင်တည်ဆောက်နိုင်ပါပြီ အွန်လိုင်းစတိုးတည်ဆောက်ခြင်းအတွက် အဓိကလိုအပ်ချက်သုံးချက်ကတော့ နံပါတ်တစ် Domain Name (eg.…
သင်သာ E-Commerce Website တခုကို ပိုင်ဆိုင်ရရင် ဘယ်လိုအကျိူးကျေးဇူးတွေ ရရှိနိုင်သလဲ -သင်ရဲ့Products များကို Facebook Pageလို ရှုပ်ပွမနေဘဲ Category အလိုက် ခွဲခြားကြည့်ရှုနိုင်ခြင််း -Customers များ ဘက်မှ 24/7 ဝယ်ယူကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း -24/7 အော်ဒါမှာယူနိုင်ခြင်း -ငွေပေးချေမှုစနစ် လွယ်ကူခြင်း -Pageတွေမှာ…
အလှဆုံးWebsite တွေ မင်း ဖန်တီးလိုက်ပါ📷 Website ဆိုတာ၂၄နာရီ ဝင်ကြည့်နိုင်ခြင်းကြောင့် Customerတွေ အတွက် အချိန်မရွေး ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ် 👉 Facebook Page မှာ ကိုယ့်ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းက အောင်မြင်နေပြီး ကိုယ့်Product တွေအကြောင်းကိုလည်း Customer တွေက သိနေပြီးဖြစ်တဲ့အချိန် ဆိုပါတော့။ အဲ့အချိန်မှာ…
Email သုံးခြင်းက လုပ်ငန်းရဲ့imageကို ယုံကြည်မှု ပိုမိုထင်ဟပ်စေနိုင်ပါတယ် Email က ဒီအချက်အလက်လေးတွေကြောင့် အခုဆိုရင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခု ဖြစ်လာပါပြီနော် E- mail က spam ထဲ လုံးဝမရောက်နိုင်ခြင်းလုံခြုံစိတ်ချရစေခြင်းယုံကြည်မှုပိုမိုရရှိလာစေခြင်းG-mail က တစ်ခါတစ်ရံ ကိုယ်ပို့ချင်တဲ့သူဆီမရောက်ဘဲ spam ထဲရောက်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ် အဲ့အခါမှာဆိုရင် လုပ်ငန်းအတွက်…
အလှဆုံးWebsite တွေ မင်း ဖန်တီးလိုက်ပါ📷 Website ဆိုတာ၂၄နာရီ ဝင်ကြည့်နိုင်ခြင်းကြောင့် Customerတွေ အတွက် အချိန်မရွေး…
တလ တသောင်းကျပ် အသုံးပြုရုံဖြင့် T-WORK Hosting 1GB plan ရရှိမှာ ဖြစ်ပြီး 20GB…
Online shopsများအတွက် Performance အမိုက်ဆုံးနှင့် စျေးအသက်သာဆုံး E-Commerce Platform သင့်Online Shopကို ခေတ်နှင့်အညီ…
Email သုံးခြင်းက လုပ်ငန်းရဲ့imageကို ယုံကြည်မှု ပိုမိုထင်ဟပ်စေနိုင်ပါတယ် Email က ဒီအချက်အလက်လေးတွေကြောင့် အခုဆိုရင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းအတွက်…
ကုန်ပစ္စည်းအသစ် ၁ခု ထုတ်ပြီဆိုရင် သမာရိုးကျနည်းလမ်းတွေဖြစ်တဲ့ သတင်းစာတွေ TV တွေ Billboard တွေမှာ ကြော်ငြာခြင်းက…
No (14/1), 79th Street, between 39th Street and 40th Street, Mandalay
We are started, asaLocal Business, Computer Sales & Service(Laptop and Desktop) and Thin Client Solution.
In 2015, We Started Web-Hosting Services and also Website Development Services.
© 2017 T-WORK SYSTEM. All Rights Reserved.